Ama-Internet Ministries - Yini okufanele silindelwe lapho usisvakashela
Yini ongayilindela uma usivakashela
Yilokho ongayilindela uma usivakashela.
Prayer: Phakathi nenkonzo yokukhulekela amadoda amaningana ayohola ibandla emithandazweni yomphakathi.
IzEnzo 2: 42 "Futhi baqhubeka beqinile emfundisweni yabaphostoli nasekuhlanganyeleni, ekuphukeni kwesinkwa, nasemithandazweni.
Ukuhlabelela: Sizohlabelela izingoma eziningana nezingoma ndawonye, ​​eziholwa ngabaholi bomculo oyedwa noma ngaphezulu. Lezi zizobizwa nge-capella (ngaphandle kokuhambisana nezinsimbi zomculo). Sihlabelela ngale ndlela ngoba ilandela iphethini lesonto lekhulu lokuqala futhi yilona uhlobo lomculo oluvunyelwe eTestamenteni Elisha lokukhulekela.
Efesu 5: 19 "nikhulumisana ngamahubo nangezingoma nangezingoma ezingokomoya, nihlabelela nenza izingoma enhliziyweni yenu eNkosini,"
IzEnzo 20: 7 "Ngosuku lokuqala lwesonto, lapho abafundi behlangana ukuphuka isinkwa, uPawulu, uzimisele ukuhamba ngosuku olulandelayo, wakhuluma nabo futhi waqhubeka nomyalezo wakhe kuze kube phakathi kwamabili."
Ekuhlanganyeleni kweSidlo SeNkosi sakhumbula ukufa kweNkosi kuze kube yilapho ebuyela futhi.
I-1st Korinte 11: 23-26 Ngoba ngathola eNkosini lokho enganikeza khona: ukuthi iNkosi uJesu ngobusuku obufanayo lapho ethengiswa khona yathatha isinkwa, futhi lapho ebonga, wasihlephula wathi, "Thatha, udle; lokhu kungumzimba wami ophukile kuwe; Yenzani lokhu ningikhumbule. "Ngendlela efanayo Wathatha indebe emva kwesidlo sakusihlwa, ethi, 'Le ndebe yisivumelwano esisha egazini lami. Yenzani njalo, njalo lapho niyiphuza, ningikhumbule. "Ngokuba njalo lapho nidla lesi sinkwa niphuza le ndebe, nimemezela ukufa kweNkosi aze afike.
Ukupha: Sinikeza umnikelo emsebenzini wesonto ngosuku lokuqala lokuqala lwesonto, siqaphela ukuthi uNkulunkulu uye wabusisa ngokucebile ngamunye wethu. Isonto lisekela imisebenzi eminingi emihle edinga ukwesekwa kwezezimali.
I-1st Korinte 16: 2 "Ngosuku lokuqala lwesonto yilowo nalowo kini makabeke eceleni okuthile, agcine njengoba engase aphumelele, ukuze kungabi khona iqoqo lapho ngifika."
Isifundo SeBhayibheli: Senza isifundo seBhayibheli, ngokuyinhloko ngokushumayela kweZwi, kodwa nangokufunda iBhayibheli nokufundisa okuqondile.
I-2T Timothy 4: 1-2 "Ngalokho ngikuyala phambi kukaNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu, ozokwahlulela abaphilayo nabafileyo ekubonakalweni kwakhe nombuso wakhe: Memezela izwi! Yilungele ngenkathi nangaphandle kwesizini. khuza, ukhuthaze, ngakho konke ukubekezela nokufundisa. "
Ekupheleni kwentshumayelo, isimemo sizosondluliselwa kunoma ngubani ofisa ukuphendula. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nobuKristu, ukuba ngumKristu noma ukucela imithandazo yesonto, sicela wenze isidingo sakho saziwa.
Inkonzo yethu yokukhonza ibhekwa njengendabuko yamasonto kaKristu. Akukona okwamanje noma okusebenzayo. Sizama ukukhulekela uNkulunkulu ngoMoya nangeqiniso.
UJohn 4: 24 "UNkulunkulu unguMoya, futhi labo abamkhulekelayo kumelwe bakhulekele ngomoya nangeqiniso."